ह्यापी प्रमिस् डे सानी - प्रभात खबर
ह्यापी प्रमिस् डे सानी
प्रभात खबर २९ माघ २०७७, बिहीबार १५:१५ मा प्रकाशित
कहाँ छाै तिमी , ढिला भईसक्याे सानी , चाँडै गर न भनेर कल उठ्न साथ भने । दिदि सारी लगाउदै हुनुहुन्छ , अब निस्किनु हुन्छ भन्दै बहिनीले भनिन ,फाेन बहिनीले उठाइएकी थिइन। अनि सारी कसले लगाइ दिदैछ उसलाई ? झन नलगाउन भनेकाे यसलाई, फेरि नअाउने कुरा किन लगाउनु ? भनेर प्रश्न गरे । उता बाट बहिनिले ममिले लगाइदिदै हुनुहुन्छ भनिन ,उनलाई सारी लगाउन नअाउने भएकोले म जहिल्यै अन्य पहिरनमा जाेड दिने गर्थे ।
बिराटनगरकाे हाेटल ह्यारिसनमा एक कार्यक्रममा मलाई अतिथिकाे रुपमा निमन्त्रण थियाे। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरका कलाकारकाे बाक्लाे उपस्थिति रहेकाे थियाे, पश्चिमाञ्चलमा रहेर काम गर्दा केही कलाकारहरू संग मेराे राम्राे चिनजान रहेकाे थियाे । नेपालकाे एक नाम चलेकाे अभिनेत्रीकाे निम्तो रहेकाे थियाे ,मैले उसलाई फाेन दिन भने ,भन्नू त बाबा भन्दै गर्दा मैले तिमी अाउन ढिला हुन्छ ,म निस्कदै गर्छु तिमी पछि बाट अाउ भने । उनले केही बाेलिनन । मैले बुझिसकेकाे थिए उनी ममी भएकोले केही बाेल्न सकिनन् । तिमिलाई लिन एकजना भाइलाई पठाउँछु भने ,उनले हुन्छ भनिन् ।
म कार्यक्रममा निर्धारित समयभन्दा अाधा घण्टा ढिलाे पुगे,मलाई रिसिभ गर्न मेराे साथी अाफै अाईन । कालाे रंगकाे लेहंगामा निकै सुन्दर देखिएकी थिईन,फ्लिमकाे पर्दामा पनि यति राम्री मैले पहिले देखेकाे थिईन । मैले जिस्काइ दिए, घर नयाँ ठाउँमा बनाएकी हाे र ? भनेर प्रश्न गरे । नाइ छैन यार , उहीँ ठाउँ त हाे । अनि किन स्वर्गबाट झरेकी परि जस्तो देखिन्छाै त ?
उनले मेराे गाला सुम्सुमाउदै भनिन , अब एक छिनमा तिम्रो स्वर्गकी रानी अाउछिन अनि मलाई भुलिहाल्छौ ।
हामी माथि पुगिसकेको थियौ तर मेराे ध्यान बाहिर गेटमा नै अडिरह्याे । कार्यक्रम भन्दा नि पश्चिमा पार्टी शैलीमा भएको उक्त समाराेहमा भन्दा मेराे ध्यान सिसा बाहिर थियाे ।
मेराे फाेनमा भाईब्रेट भयाे, उनले गरेकी रहीछिन् ,हत्तपत्त मैले बाहिर हेरे कतै देखिन, अनि तल अाेर्लिए उनी गेटमा थिईन । कार्यक्रमकाे प्रवेश पास नहुदा उनलाई राेकेका रहेछन् । म पुगे पछि उनलाई भित्र अाउन ईशारा गरे गार्डले सहमती जनाउदै जानुस भनेसी उनी भित्र पसिन् । उनकाे पहिरन र श्रृङ्गारकाे रंग भिन्न थियाे तर उनलाई निकै सुहाएकाे थियाे । अाधा खुल्ला कपाल, गलामा माेतिका हार, कानमा भारी झुम्का अनि हातै भरी मेहन्दीले अघि रञ्नुले भने जस्तै उनलाइ स्वर्गकी परी देखिएकी थिइन्।
हामीलाई देखेर रञ्जु अनि अन्य साथीहरूले स्टेजबाटै थम्बअप गरेर इशारा गरे । कार्यक्रम पछि सबैसंग चिनजान भयाे मेरो र उनको, सबैले हाम्राे जाेडीकाे खुलेरै प्रसंशा गरेरहे,रञ्जुले गाजलकाे कालो रङ उनकाे सेतो गालामा लगाउदै कसैकाे नजर नलागाेस मेराे परिलाई भन्दै अंगालो हालिन् ।
सानीले मेराे हात समाउदै अाफ्नाे शिर मेराे काँधमा राखेर अढेस लागिरहिन्। केही बेरमा , बाबा तपाईंले मलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ है? म निकै भाग्यमानी छु , मलाई छाेड्नु हुन्न नि? भन्दै न्याउरी भएर प्रश्न गरिन । यति भन्दा नभन्दै उस्को आँखा रसाइसकेको थियो।
उनकाे अाँखामा हेरेर भने जबसम्म बाच्छु तिम्राे साथमा नै बाच्नेछु ! नभए तारा भएर तिम्रो शिर माथी बस्नेछु तिम्राे सहरकाे अाकाशमा ।
बाबा जुन दिन तपाईंकाे प्रेम भुल्नेछु मेराे मनबाट, त्याे दिन मेराे अन्तिम दिन हुनेछ , भनिन् ।
हाम्राे सम्बन्धमा मबाट कहिल्यै पनि विश्वासघात हुने छैन, अनि केही फरक पर्ने छैन यदि याे घात तिमीबाट नै भएछ भने , सधै तिम्रै पक्षमा हुनेछु भने ।उसले अङ्गालोमा कस्सिएर बाधिन्। हामीबीच कुनै दुरी थिएन,याे दृश्य मेराे साथिहरुले देखिरहेका थिए । याे त हाम्राे म्युजिक भिडियोमा राख्ने सिन हाे है साथी हो भन्दै जिस्काए पनि ।
ह्यापी प्रमिस डे सानी ! तिमिलाई मसंग अभाव हुनसक्ला तर जीवनभर कुनै दवाव हुनेछैन, वचन रह्याे प्यारी ।